Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha saxda ah ee Jumlada | Saxnimada QY
Iyada oo horumarinta bulshada iyo horumarinta tignoolajiyada farsamaynta qaybaha makaanikada, qaybaha saxda ah ee farsamaynta iyo tignoolajiyada wax soo saarka ayaa sameeyay horumar weyn. Soo ifbaxa talefannada casriga ah, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, robots-ka warshadaha, iwm, waa kuwo aan ka sooci karin tignoolajiyada farsamaynta qaybaha qalabka. Horumarinta warshadaha farsamaynta qaybaha saxda ah runtii waa dhakhso. Qaybo badan oo mashiinada saxda ah ee warshadaynta ayaa bilaabay inay dareemaan cadaadiska isbeddelka warshadaha. Tiknoolajiyada wax soo saarka ee qaybaha farsamada ee dhaqameed, gaar ahaan tignoolajiyada farsamaynta qaybaha makaanikada ee saxda ah, way adkayd in la daboolo baahiyaha warshadaha wax soo saarka mishiinka ee hadda jira.
QY Precision waxay khibrad buuxda u leedahay habaynta qaybaha qalabka saxda ah ee saxda ah, soo dhawoow noo soo dir sawiradaada si aad u hesho xigasho degdeg ah.
Farsamaynta iyo samaynta qaybaha makaanikku waxa ay gashay nolol maalmeedka dadka, dadkuna waxa ay qabaan shuruudo aad u sareeya oo aad u sareeya si ay u farsameeyaan qaybaha kala duwan ee saxda ah, waxaanay noqdeen qayb kamid ah hamiga dadku u qabaan nolol wanaagsan. Kala duwanaanta, xawaaraha cusboonaysiinta, tayada iyo shuruudaha adeegga iibka ka dib ee alaabada caqliga leh ee ku tiirsan tignoolajiyada wax ka qabashada qaybaha CNC ayaa noqda kuwo aad iyo aad u badan. Haddii aad rabto inaad buuxiso shuruudaha xulashada macaamiisha ee alaabada farsamaynta qaybaha saxda ah, waa inaad isticmaashaa tignoolajiyada farsamaynta tayada sare leh. Iyo tikniyoolajiyadda farsamaynta qaybaha saxda ah, kuwaas oo tignoolajiyada farsamaynta qaybaha birta ee saxda ah ay tahay tii ugu horreysay ee culayska saarta.
Marka laga eego aragtida qaybaha saxda ah ee farsamaynta iyo tignoolajiyada wax soo saarka ee alaabada smart, ku habboonaanta qaybaha casriga ah ee farsamaynta iyo qaybaha saxda ah waxay ku lug leeyihiin cilmi baarista iyo horumarinta alaabta smart, naqshadeynta habka, wax soo saarka iyo iibinta. Waxay yihiin kuwo isku dhow oo is dhex galiyay. Inta lagu jiro habka wax-soo-saarka, farsamayaqaannada farsamaynta qaybaha waa inay hubiyaan in dhammaan isku-xirayaashu ay sax yihiin. Haddii ay dhibaato ka jirto mid ka mid ah xiriirinta qayb ka mid ah CNC, waxay u badan tahay inay saameyn ku yeelato codsiga dhammaan habka saxda ah ee habka wax soo saarka, taas oo si dhab ah u saameynaysa heerka processing iyo tayada alaabta smart.
Hore: Robotics & Smart Robots
Xiga: Qaybaha warshadaha baabuurta
Qaybaha Aluminium ee Saxda ah
Qaybaha caaga ah ee saxda ah
Qaybaha Saxda yar